Shiinaha Kaaliyaha nacfiga adeega iyo wakiilka | Sunson
Faa'iidooyinka daadinta dhibcaha
Soo daadinta ayaa ah qaab ganacsi oo weyn oo loogu talagalay ganacsatada doonaya inay wax ku bilaabaan maxaa yeelay waa la heli karaa. Hoos u dhigista, waxaad si dhakhso leh u tijaabin kartaa fikradaha ganacsi ee kaladuwan ee leh hoos u dhac xadidan, taas oo kuu ogolaaneysa inaad wax badan ka barato sida loo doorto oo loo suuq geeyo alaabooyinka loo baahan yahay. Halkan waxaa ku yaal dhowr sababood oo kale oo sababta daadinta u tahay nooc caan ah.
1. Lacag yar ayaa loo baahan yahay
Malaha faa'iidada ugu weyn ee daadinta daadinta ayaa ah inay suurtagal tahay in la furo dukaanka ganacsiga iyada oo aan loo baahnayn kumanaan kun oo doollar xagga hore. Dhaqan ahaan, tafaariiqleyda waa inay xiraan xaddi aad u tiro badan oo ah alaabada lagu iibsado raasamaalka.
Qaabka daadinta, uma baahnid inaad wax ku iibsato alaab haddii aad hore u sameysay iibka oo uusan macaamilku ku bixin. Iyadoo aan la helin maalgashiyada horudhaca ah ee hore, waxaa suurtagal ah in la bilaabo badeecooyinka la soosaarayo oo lagu bilaabo ganacsi dhibco guul leh leh lacag aad u yar. Iyo sababta oo ah inaadan ka go'an inaad iibiso-iyada oo loo marayo wax kasta oo alaab ah oo laga soo iibsado xagga hore, sida ganacsi tafaariiqeed oo dhaqameed, waxaa jira khatar yar oo ku lug leh bilaabista dukaan daadanaya.
2. Si fudud oo lagu bilaabo
Inaad socodsiiso ganacsi e-commerce ah ayaa aad ufudud badan marka aadan u baahnayn inaad wax ka qabato alaabada jirka. Bixinta daadinta, uma baahnid inaad ka walwasho:
Maareynta ama bixinta bakhaarka
Xirxirida iyo dirista amarradaada
Raadinta alaabada sababo xisaabeed awgood
Wax ka qabashada soo noqoshada iyo shixnadaha soo gala
Si joogto ah u dalbashada alaabada iyo maaraynta heerka saamiyada
3. Dusha sare
Sababtoo ah maahan inaad wax ka qabato iibsashada alaabada ama maaraynta bakhaarka, kharashyada kor ku xusan aad ayey u hooseeyaan. Xaqiiqdii, dukaamo badan oo guul-darro u daadiya ayaa loo maamulaa sidii meherado ku saleysan guryaha, oo u baahan wax ka yar laptop-ka iyo xoogaa kharashyo ah oo soo noqnoqda oo ay ku shaqeeyaan. Markaad koraysid, kharashyadan ayay u badan tahay inay sii kordhaan laakiin wali way hooseyn doonaan marka loo eego kuwa ganacsiyada leben-iyo-hoobiyeyaasha dhaqameed.
Ganacsi daadinta ayaa laga wadi karaa meelkasta oo leh xiriir internet. Ilaa iyo inta aad si fudud ula xiriiri karto alaab-qeybiyeyaasha iyo macaamiisha, waad ordi kartaa oo maareyn kartaa ganacsigaaga.
5. Xulid ballaadhan oo ah alaabooyin la iibinayo
Maaddaama aadan u baahnayn inaad horay u iibsato walxaha aad iibiso, waxaad u soo bandhigi kartaa noocyo badan oo ka mid ah alaabooyinka u janjeera macaamiishaada mustaqbalka. Haddii alaab-qeybiyeyaashu ay alaab dhigtaan, waxaad ku qori kartaa iib ahaan dukaankaaga internetka oo aan qiimo dheeraad ah lahayn.
6. Imtixaan ka fudud
Soo daadinta waa hab fulin waxtar leh u leh furitaanka dukaan cusub iyo milkiileyaasha ganacsiyada ee raadinaya inay tijaabiyaan macaamiisha rabitaanka cuntada leh ee leh alaabooyin dheeri ah oo dheeri ah, tusaale ahaan, qalabyada ama khadadka wax soo saarka oo cusub. Faa'iidada ugu weyn ee daadinta dhibcaha ayaa ah, markale, awood u lahaanshaha qorista iyo suurtagalnimada iibinta alaabada kahor intaan la goaansan iibsashada tiro aad u tiro badan.
7. Miisaan si fudud
Iyada oo ganacsi tafaariiqeed oo dhaqameed, haddii aad hesho seddex jibaar tirada amarada, waxaad badanaa u baahan doontaa inaad sameyso seddex jibaar shaqo ka badan. Adiga oo ka faa'iideysanaya alaab-qeybiyeyaasha daadanaya, inta badan shaqada si loo farsameeyo amarro dheeri ah waxaa qaadaya alaab-qeybiyeyaasha, taas oo kuu oggolaaneysa inaad ku sii ballaariso xanuun yar oo sii kordhaya iyo shaqo koror yar.
Kordhinta iibintu had iyo jeer waxay keeneysaa shaqo dheeri ah-gaar ahaan laxiriirta taageerada macaamiisha-laakiin ganacsiyada adeegsada miisaanka hoos udhaca gaar ahaan marka loo eego ganacsiyada dhaqameed e-commerce.
Bilow meheraddaada Burburinta maanta